China 2021 Runako dhizaini yemagetsi munyu uye pepper grinder set vagadziri uye vanotengesa | Trimill
Chii chinokuya mhiripiri?
Pchikwepa chigadzirwa chekicheni chinoshandiswa kukuya mhiripiri, munyu wegungwa, zvinonhuwira zvichingodaro. Saka naivowo vanogona kudaidzwa munyu wemunyu kana zvinonhuwira. Simba remhiripiri iro rakatogadzirwa rakasiyana nekukuya nega mukuravira uye kuravira, vanhu vazhinji vanofarira kushandisa pepper grinder.
Pepper grinder inowanzo kuve yakakamurwa kuita bhuku pepper grinder uye yemagetsi pepper grinder , magetsi pepper grinder rakakamurwa kuita marudzi maviri ebhatiri uye kuchaja, musika uchiri kutongwa nemabhatiri mhando, bhatiri magetsi mhiripiri mukuyi inowanzo gadzirwa nesimbi isina simbi goko, acrylic silo, zvedongo kukuya moyo, bhatani repurasitiki bhatani, yemagetsi bhokisi kuumbwa. Zvakare tiye chimiro ye pepper grinder yakatenderera.
Semuenzaniso semuenzaniso wedu ESP-16
1.Beaty nemutsara aesthetic dhizaini uye nyore kubata;
2. bhatani rakakura kudzvanya zviri nyore;
Yakareba kushandisa nguva nematanhatu Nha. 7 mabhatiri kudzikisa kuwanda kwekutsiva bhatiri;
4. Iyo ceramic yekugedza musimboti ine zvakawanda zvakanakira kusanganisira hutano, chengetedzo, kupfeka-kusagadzikana, ngura-isingagadzike, isinganetsi, inogona kuwachika;
5. Inokodzera saizi yekuchinjika pfundo kugadzirisa zvakanaka kana zvakasindimara kuzadzikisa zvido zvezvakasiyana siyana;
6. Iwe unogona kuona yemukati yeimba yekuchengetera kuburikidza neanoonekwa hwindo dhizaini;
7. Dhizaini yemwenje ye LED haingori nyore chete kuona iyo yekugaya maitiro zvakajeka, asi zvakare inogona kuwedzera manzwiro ekunzwa.
Step1: Tendeuka nguva kuti uvhure imba yekuchengetera uye shandisa chipunu kuwedzera zvinonhuwira mudura.
Step2: Tun anticlockwise kurodha mudura.
Step3: Vhura iyo mota bhokisi uye isa mabhatiri nenzira kwayo.
Step4: Dzorera iyo yekugadzirisa pfundo kugadzirisa ukobvu.
Step5: Dhinda bhatani repamusoro kuti utange kukuya.
Cherechedza: Ndokumbira utarise kuti iwe unofanirwa kutora mabhatiri kana ukasashandisa kwenguva yakareba.
1. Isu tine yakanakisa chigadzirwa dhizaini timu, ivo vakanaka pane dhizaini kusangana nevatengi 'yakagadziriswa chinodiwa.
2. Isu tinoziva hunyanzvi tekinoroji yemhiripiri mukuyi, isu takanaka atthe dhizaini uye kugadzirwa kwekukuya moyo. Kune hupfumi hwakasiyana hwekukuya musimboti, kazhinji isu tinosarudza mhando maererano nechimiro cheiyo yekukuya, kukuya zvinhu uye kukuya kugona, tinogona kusangana zvakasiyana tsika 'zvinodiwa.
Pashure: Yemahara sampuro yeMagetsi Pepper Mill - Kukosha Kwemunyu Uye Pepper Grinder - Trimill
Zvadaro: Fekitori Zvakananga 100ml Inoraswa Chinyorwa Munyu Uye Pepper Grinder
Electric Munyu Uye Pepper Grinder Set
Giravhiti Yemagetsi Munyu Uye Pepper Grinder Set
Classic bhatiri yemagetsi munyu uye mhiripiri chigayo E ...